2यूहन्नाको एन डी पत्र – 2माछा
घर / बाइबल / Epistles / 2यूहन्नाको एन डी पत्र
1:3 May grace, कृपा, and peace be with you from God the Father, and from Christ Jesus, the Son of the Father, in truth and in love.
1:4 म सत्य हिंडिरहेको आफ्नो छोरा को केही पत्ता किनभने म धेरै खुसी थिए, हामी पिताबाट आज्ञा प्राप्त गरेझैं.
1:5 र अब म आवेदन, महिला, तपाईं एउटा नयाँ आज्ञा लिख ​​छैन भने, तर बरु त्यो आज्ञा जो हामी सुरुदेखि छन्: भनेर हामी एकअर्कालाई प्रेम.
1:6 र यो माया हो: हामी उहाँको आज्ञा अनुसार हिंड्न कि. यो तपाईँले सुरुदेखि नै तरिकामा सुनेका कि आज्ञा हो, र जसमा तपाईं हिँड्नुपर्छ.
1:7 थुप्रै deceivers संसारमा बाहिर गएका छन्, येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनुभएको छ स्वीकार नगर्ने ती. यो जस्ता एक एक धोकेबाजले र एक एटिक्राईष्ट छ.
1:8 आफूलाई लागि होसियार हुनुहोस्, के तपाईं पूरा के गुमाउनु नत्र, र यति भनेर, सट्टा, तपाईं पूर्ण इनाम प्राप्त हुन सक्छ.
1:9 withdraws र हरेकले ख्रीष्टको सिद्धान्त मा रहिरहँदैन, परमेश्वरको छैन. जसले यो सिद्धान्त रहिरहन्छ, यो रूपमा यस्तो एक पिता र पुत्र दुवै छ.